मैले गरेको काम नराम्रो भए स्रोता दर्शकले ‘फिल्टर’ गर्छन् : ज्योती मगर |
प्रकाशित मिति :2016-09-02 11:43:18
पछिल्लो समयमा लोक फ्युजनमा चर्चामा रहेको नाम हो ज्योती मगर । रोल्पाको नुवागाउँमा जन्मेकी ज्योती १० वर्षदेखि काठमाडौंमा बस्दै आएकी छिन् । उनले लोकदाहोरीबाट सांगीतिक यात्रा शुरु गरेको करिव १७ वर्ष भयो । उनी नाच्न र गाउनमा उत्तिकै अव्बल छिन् । नेपाली लोकदोहोरीमा नाच्दा लगाउने गरेको कपडा र दाहोरो अर्थ लाग्ने शब्दको कारण उनी पटक पटक विवादमा आउने गरेकी छिन् । उनको सांगीतिक यात्रा र संघर्षको बारेमा महिला खबर डट कमले उनीसँग कुराकानी गरेको छ ।
तीज आयो ज्योती मगरलाई कत्तिको छोएको छ ?
म अलि व्यस्त व्यस्तै छु । तर, तीजको कारण होइन साधारणतया म एकनासले व्यस्त नै हुन्छु ।
अहिले विशेष के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
स्टेज कार्यक्रम गर्न नवलपरासी गएकी थिएँ । अब यो साता दुबई जाँदै छु । यस्तै छ । साँगीतिक कार्यकम मै व्यस्त छु । कलाकारको लागि यो खुशी पनि हो ।
तपाँईको बाल्यकाल कसरी बित्यो ?
मेरो बाल्यकाल सामान्य बित्यो । आम गाउँको बालबालिकाको जस्तै थियो । गाउँले परिवेशमा हुर्कें । गाउँको साधारण खेती किसान गर्ने परिवारमा जन्मेकी हुँ । मेरो बुवा आमा अहिले पनि खेती किसान नै गर्नुहुन्छ ।
साँगीतिक यात्राको सुरुवात कसरी भयो ?
म सानैदेखि लोकदोहोरी सुन्थे । मलाई खुब मन पथ्र्यो । दुई कक्षाबाट नै गीत गाउने प्रतियोगितामा भाग लिन थालेँ । आठकक्षापछि दाङ झरें पढ्नको लागि । स्कुल पढ्दा नै जिल्लास्तरीय लोकदोहोरी प्रतियोगिताहरूमा भाग लिँदा मेरो टिमले धेरै वटा प्रतियोगिता जितेका छौं ।
सांगीतिक यात्राको सुरुवाती दिनमा कस्तो संघर्ष रह्यो ?
सुरुवातमा त नाम होस, दाम होस भनेर लागियो । त्यो चाहनाको पछि दौडनाले संघर्ष भन्ने नै लागेन । मलाई त अब पो मेरो संघर्षका दिन शुरु भए जस्तो लाग्छ । मैले मेरो क्षेत्रमा एउटा स्थान बनाएँ । अब यसलाई अझ माथि पुर्‍याउन र टिकाउन गाह्रो छ । यसको लागि मैले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । यस अर्थमा अहिले संघर्ष गरिरहेकी छु भन्ने लाग्छ ।
लोकदोहोरीको चल्तापुर्जा कलाकारको रुपमा तपाँईलाई लिइन्छ । खासमा लोकदोहोरी भनेको कस्तो गीत हो ?
खासमा लोकदोहोरी गीत भनेको सवाल जवाफ हो । यसबाट समसामयीक विषयमा रहेर एक अर्काको मनको पीडा, भँडास पोख्न मिल्छ, तर अहिले दुई जनाले गाएपछि लोकदोहोरी भन्ने गरिएको छ । यसले पछिल्लो पुस्तालाई अलमलमा पारेको छ लोकदोहोरी बारेमा । लोकगीत सम्बन्धि ज्ञाताहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूले लोक गीत र लोक दोहोरीबीचको फरकलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।
तपाँईले गाउने गीत चाँही कस्तो गीत हो त ?
मैले गाउने फ्युजन लोकगीत हो । भाका लोक हुन्छ । संगीत पश्चिमा शैली मिसिएको हुन्छ । यसलाई विशुद्घ लोकगीत भन्न मिल्दैन ।
अनि यस्तो गर्दा विशुद्घ लोकगीतको परिभाषा विग्रदैन ?
म लोक गीत र हाम्रो राष्ट्रिय तरकारी खाना गुन्द्रुक उस्तै हो भन्छु । किन भने गुन्द्रुक पनि अचार खाएपनि भयो तरकारी खाएपनि भयो । यसलाई इच्छा र चाहना अनुसार बनाएर खाना मिल्यो । त्यस्तै लोकगीतलाई पनि विशुद्घ लोकगीत बनाएर गाए पनि भयो । मैले गाउने गीत जस्तो फ्युजन बनाए पनि भयो । यो त अहिले ट्रेन्ड नै चलेको छ । बजारमा आएका भनिएका अधिकांश लोकगीत यही शैलीको छ ।
समाजमा अझैपनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परम्परावादी छ । तँपाईले म्युजिक भिडियोमा लगाएको कपडा भड्किलो, समाजमा विकृति छाएको आरोप लाग्ने गर्छन् नि ?
म एउटा कलाकार हो । मैले समाजको चाहना र आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । यदि मैले गाउने गीतले, लगाएको कपडाले विकृती ल्यायो भन्ने हो भने मेरो गीत त यहीँ समाजले हेर्ने र सुन्ने हो । कलाकार जहिले पनि समाजको इच्छा र चाहना अनुसार चल्ने हो । समाजले नरुचाएको गीत संगीत कसरी चल्छ ? समाजले निर्धारण गरेको बाटोमा हिँड्नुपर्छ । यदि साँच्चै मैले गाउने गीतले विकृति ल्याएको हो भने मलाई फिल्टर गरेर पठाउनु हुन्छ नि । ज्योती मगर भनेर चिनिनुमा पनि दर्शक स्रोताको हातमा छ । ज्योती मगर नाम लोक क्षेत्रबाट विलिन हुन पनि स्रोता, दर्शक कै हातमा छ । समय परिवर्तनशील छ । समय अनुसार चल्ने हो । कलाकार भनेको समाजको ऐना हो । समाजमा जे छ त्यो कलाकारले प्रस्तुत गर्ने हो । मैले पनि त्यही गरिरहेकी छु । अहिले गुन्युचोली लगाएर हिँड्छ ? आधुनिक समय छ । यदि मैले गरेको काम नराम्रो छ भने म स्वत फिल्टर भएर जान्छु । यसमा दुईमत छैन ।
अहिले महिलाले समाजका कतिपय परम्परावादी सोच तोड्दै आएका छन् । तर जुन तरिकाले तपाँईले तोड्नुभएको छ , यसलाई कसरी लिने ?
हो हाम्रो नेपाली दिदीबहिनीहरू धेरै परम्परावादी सोँचहरु तोड्न थालेका छन् । यो समयको माग हो । कतिन्जेल हामी महिला भए कै कारण सिमित घेरामा बस्नु पर्ने ? हाम्रा पनि त रहर इच्छा हुन्छन् । हो अहिले हामी नेपाली महिला आफ्नो इच्छा रहर अनुसार चल्न थालेका छौं, तर यही हाम्रा रहर र इच्छालाई फेरि पनि विकृती भित्र्याएको आरोप लगाउन थालेका छन् परम्परावादीहरूले । हामी महिलालाई केही थाहै छैन जसो गरेर अनेक आरोप लगाउन पछि पर्दैनन् । तर हामीले आफूले गरेको कामप्रति गर्व गर्नुपर्छ । हामी समाजमा रहने मान्छे हौं । हामी समाज र समय अनुसार चल्न पाउनुपर्छ । मैले जुन किसिमको गीत गाएको छु ।, यही समाज कै सेरोफेरोमा रहेका विषयवस्तु हुन् । हो म अलिकति फरक तरिकाले प्रस्तुत हुन्छु । समाज जस्तो छ त्यस्तै मेरो गीत छ । मैले भर्खरै गाएको तीज गीत जान्न बाबा जान्न,,,को अर्थ कत्ति गहिरो छ । यहाँ पुरुषले खुलेआम सडकको किनारमा पिसाव गर्दा केही नभन्ने अनि महिलाले हाफपेन्ट लगाउँदा छाडा भईस भन्ने ? मैले त्यस्तो महिलाको ईज्जतमा औँला उठाउने कार्य गरेको छैन । मैले मेरो ईच्छा र चाहना अनुसार लगाएको छु । समाजमा चल्तीमा रहेको कपडा पहिरिएको छु । यसलाई शसक्तीकरण हो भन्छु म । समाज भन्दा विपरीत गएर होईन महिलाले पनि आफ्नो सपना र रहर पुरा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
सन्चार माध्याममा तपाँईका बारेमा आउने समाचारलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
कतिपय समाचारहरू नकारात्मक हुन्छन् । आफैलाई हाँसो लाग्ने खालको पनि हुन्छ । मेरो पेशालाई नै असर गर्ने खालका समाचार आउँदा त म खण्डन गर्छु । तर कतिपयलाई म वास्ता गर्दिनँ । एक त मेरो बारेमा कस्ता कस्ता समाचार आए भनेर थाह पनि हुँदैन । अर्को कतिपयले समाचार बिकाउनको लागि पनि विभिन्न मसालेदार समाचार बनाउने होडले पनि यस्ता समाचार आउँछन् । त्यस्तालाई के भन्ने जस्तो लाग्छ ।
तपाँईलाई त पारिवारीक जमघट भएको कार्यक्रममा बोलाउँदैनन् भन्छन नि ?
अँ, केही हदसम्म सत्य हो । जसले मलाई चिन्नुभएको हुँदैन उहाँहरूमा केही सञ्चार माध्यममा आएको नकारात्मक समाचारको असर हो । उहाँहरूमा भ्रम छ । तर मलाई चिन्नु भएकाहरूबाट त्यस्तो हुँदैन । प्रत्यक्ष भेटेपछि उहाँहरूको त्यो भ्रम टाढा हुन्छ । कुनै पनि कार्यक्रममा दर्शकको उपस्थिति अनुसार म प्रस्तुत हुने गर्छु । मैले तीन पुस्ता बाजे, छोरा, नाती एकै ठाउँमा भएको कार्यक्रममा प्रस्तुती दिईसकेकी छु ।
आम मान्छेले बुझने ज्योती मगर कस्तो कलाकार हो ? कसरी लिईदिउन भन्ने लाग्छ ?
आम मान्छेले बुझ्ने ज्योती मगर एकदम हाईफाई भएर हिँड्ने, दुःखले नछुने, शहरीया किसिमको । अलिक हाउडे, विन्दास स्वभावको । तर म रियल लाईफमा एकदम साधारण नेपाली महिला हुँ । म गाउँमा जन्मेकी हुँ । गाउँले जीवन नजिकबाट भोगेकी छु । दुःख बुझ्छु । गाउँले महिलाको अवस्था बुझेकी छु । म एउटा कलाकार हुँ मलाई साधारण नेपाली कलाकारको रुपमा स्वीकार्नुहोस भन्न चाहन्छु । म प्रतिको नकारात्मक भ्रम पनि छ । समाचारमा आए जस्तो म छाडा पनि छुइन ( हाँसो ) म नेपाली महिला हुँ । छिट्टै भावनामा बग्छुु । नेपालीले पचाउन सक्ने जत्तिको खुल्छु, खुलेकी छु । परिवार बसेर हेर्नु नहुने किसिमको कार्य गरेको छैन । यत्ति बुझिदिनु भए पुग्छ ।
पुरुषले महिलालाई कसरी लिने गरेको पाउनु भएको छ ?
महिलालाई हल्का रुपमा लिन्छन् । हाम्रो कलाकारिता क्षेत्रमा पनि महिलालाई क्षमता भन्दा रुपले चलेको मान्ने पुरुषहरू छन् । रुप भईन्जेल चल्ने अलि उमेर ढल्केपछि सकिन्छ भन्ने बुझाई छ । यस्तो हुँदा एउटा पुरुष कलाकारले महिला कलाकारको क्षमता नहेरी रुपको आधारमा मुल्याङ्कन गरिँदा दु्:ख लाग्छ । उमेरको हद पुरुषलाई पनि लाग्छ भन्ने नै सोँच्दैनन् ।
महिला कलाकारलाई गायन क्षेत्रमा अप्ठ्यारो छ ?
अप्ठ्यारो छ । महिला भएकै कारण यस्तो गीत नगाउ, यस्तो कपडा नलगाउ , फलानासँग नहिँड । मेरो बारेमा नकारात्मक समाचार बन्नुको कारण पनि यही हो । मैले लगाएको कपडामाथि धेरै टिप्पणी हुनुको कारण पनि यस्तै सोँचको उपज हो । हाम्रो समाज नै पुरुषवादी संरचनाबाट निर्मित छ । विहे गरेपछि श्रीमानको सेवा गरेर बस । सासुससुराको सेवा गरेर बस । घर सम्हालेर बस । भन्ने धारणाबाट सन्चालित छ अझै पनि हाम्रो समाज । घरेलु हिँसा सहन पनि बाध्य हुनुपर्छ । यो सबै तोड्न सक्ने अगाडी आउँछन् । नसक्ने हराउन बाध्य हुनुपर्छ । अगाडी आएकाहरू त्यस्तो सोँचबाट ग्रसितको आँखाको तारो बनिरहनुपर्छ ।
ज्योती मगरले कुनै हिंसा भोग्नु परेको छ ? अबको पाँच वर्षपछि ज्योती मगर कुन अवस्थामा होला ?
म अविवाहित भएको कारण हिंसा त भोग्न परेको छैन । अबको पाँच वर्षपछि अझै हिट गीतहरू दिएको हुनेछु । विहे गरें भने घरजम गरेको हुनेछु (हाँस्दै) । संगीत क्षेत्रमा त बुढी भईन्जेल पनि हुन्छु नै (फेरि हाँसो )।
तस्विर सबै ज्योती मगरको फेसबुकबाट